May 2018 ~ Thinksphere
12:05 AM Political Commetaries No comments
उज्ज्वल प्रसाई / १३ चैत २०७४
गैरसरकारी संस्था (गैसस) को आलोचना गर्नुपर्ने धेरै कारण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र ती संस्थाका सहयोगमा सञ्चालित घरेलु गैससका कामकारबाही सबै प्रशंसनीय छैनन्। एकथरिको बुझाइमा यस्ता संस्था मूलतः साम्यवादी आन्दोलनको तेजोबध गर्न पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूले सिर्जना गरेका हुन्। खासगरी अविकसित र तेस्रो विश्वका भनिने मुलुकमा विकासका नाममा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर सोभियत रसियाको दबदबा कम गराउन गैसस अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने मत बलियो छ। सो दाबी पूर्ण असत्य नहुन सक्छ।
नेपाली समाजमा पछिल्ला केही दशकमा गैससमार्फत गरिएका काम गतिलो नभएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले गैसस भनेका ठोस काम कम गर्ने र गफ ज्यादा गर्ने संस्था हुन् भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। कागजमा विकास र प्रगतिको रंगीन चित्र कोरेर रकम पचाउनेहरूको लर्को लामो छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। गैससमार्फत हुने भ्रष्टाचारका उदाहरण प्रशस्त होलान्। यस्ता भ्रष्टाचारका गतिला अध्ययन पढ्न पाइएको छैन। यद्यपि यसबारे पंक्तिकारको अल्पज्ञान पनि दोषी हुनसक्छ।
उज्ज्वल प्रसाई / १५ फागुन २०७४
नोम चोम्स्कीले सन् २००१ मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्समा सैन्यवाद, लोकतन्त्र र सूचनाको हकबारे भाषण दिएका थिए। सो भाषणमा अमेरिकी सत्ता र सञ्चारमाध्यमले नागरिकको सूचनाको हकमा कसरी अंकुश लगाउँछन् भनेर बताए। ‘डेमोक्रोसी एन्ड पावरः द दिल्ली लेक्चर्स’ नामको पुस्तकमा संग्रहित भाषणमा लुकाइएका वा प्रकाशन नगरिएका सूचनासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण दृष्टान्त छन्।
सन् २००० को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा बम बर्साउन थाल्यो। सेप्टेम्बर १६ मा पाकिस्तानमाथिको उसको प्रभाव उपयोग गर्दै अफगानिस्तान जाने खाद्यान्न रोक्न लगायो। अत्यावश्यक खाद्यान्न रोकेर हजारौं अफगानीलाई भोकमरीको सिकार बनाउने उसको योजना थियो। अमेरिकी सत्ताको यो हर्कतबारे सामान्य अमेरिकी बेखबर थिए। अमेरिकाका सहरहरूमा सो अमानवीय निर्णयले कुनै प्रतिक्रिया सिर्जना गरेन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय तात्कालिन मानव अधिकार उच्चायुक्त मेरी रोबिन्सनले अफगानिस्तानमा भइरहेका ज्यादती रोक्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरिन्। लाखौं मान्छे भोकमरीको सिकार हुँदा रुवान्डाको जस्तो हिंसा दोहोरिन सक्ने भनेर सचेत गराइन्। रोबिन्सनको सो अपिल सुनिएन। चोम्स्कीका अनुसार अपिलको रेकर्डसमेत राखिएन। अमेरिकी प्रेसमा रोबिन्सनको भनाइलाई महत्व दिइएन। ‘केवल तीन छरिएका पंक्तिहरूमा सो अपिल छापियो।’ अर्थात प्रकाशन गरेजस्तो भान पारेर महत्वपूर्ण सूचना लुकाउन खोजियो।
उज्ज्वल प्रसाई / १२ फागुन २०७४
मृत्युले हडताल गरे के हुन्छ ? अर्थात्, कुनै एउटा मुलुकको परिधिभित्र कसैको पनि मृत्यु हुन छोड्यो भने के हुन्छ ? एउटा बेनामे देशमा त्यस्तो समय आयो। मृत्युशय्यामा घिटिघिटी भएका मान्छे बौरिन थाले। बुढ्यौलीले थलिएर ‘आज हो कि भोलि’ भनिएका मान्छेको मृत्यु टर्‍यो।
मान्छे मर्न छोडेपछि सबभन्दा पहिले त्यो मुलुकको महत्वपूर्ण धार्मिक संस्था चिन्तित बन्यो। मान्छेले धर्ती छोड्नु नपरेपछि परलोकको कथा बेकार भयो। स्वर्ग र नर्कका परिकल्पना अर्थहीन भए। मरेपछि स्वर्ग पुगिने आशामा मान्छेले भगवान्को अर्चना गर्न छोडे। गिर्जाघरहरूको धन्दा सबै चौपट भयो। त्यसैले सबभन्दा ठूलो चिन्ता गिर्जाघरका मालिकहरूलाई भयो। भगवान्का दूत दाबी गर्ने पुजारीहरूले परमात्मालाई यसबारेमा जिज्ञासा राखेको र यसको छिट्टै समाधान खोजिने बताउन थाले।
बुढ्यौलीले कुँजिएका मानिसको सेवामा हाजिर परिवारका सदस्यलाई पनि उस्तै हैरानी थपियो। स्याहार गर्नुपर्ने दिन थपिँदै गएपछि उनीहरूलाई झिँझो लाग्न थाल्यो। उमेर पुगेका मानिस र रोगले थलिएका आफन्त बोकेर सयौं परिवार मुलुकको सिमाना काटेर अन्यत्र दौडन थाले। छिमेकी मुलुकमा कालले आफ्नो धर्म छोडेको थिएन। त्यहाँ मानिसको मृत्यु भइरहेको थियो। मर्नुपर्ने तर मर्न नसकेका सयौं मान्छे लिएर उनीहरू छिमेकी देशको शरणमा पुगे। त्यहाँ लगेका मानिसले मृत्युवरण गर्लान् भन्ने उनीहरूको आशा थियो।
उज्ज्वल प्रसार्इं / ०१ फागुन २०७४
उज्ज्वल प्रसाई / १६ माघ २०७४
‘धेरै पढ्यो भने मान्छेको दिमाग खराब हुन्छ ...।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो दलीय सहयात्राबाट अलग भएका बाबुराम भट्टराई र आहुतिबारे टिप्पणी गर्दै यसो भने। यी दुई नेता धेरै पढेका कारण आफ्नो नेतृत्वको दलबाट बाहिरिएका हुन् भन्ने आशय व्यक्त गरे। शक्ति र सत्ताको सहज बाटो नरोजेर नयाँ बाटो खोज्ने दुष्कर यात्रामा निस्केका हुन् भनेर तिनलाई गिज्याए। उनले यसो भन्दैगर्दा सभाहलमा कहिले ताली बजे, कहिले खित्का छुटे। माओवादी केन्दसम्बद्ध लेखक, कलाकार र संस्कृतिकर्मीहरूको भेलामा अध्यक्षले सो भाषण गरेका थिए। डरलाग्दो आइरोनी यही हो कि उनले अध्ययनविरोधी भाषण गर्दा स्वयं चिन्तक र लेखकहरू खित्का छोडेर बसिरहे।
11:46 PM Essays No comments
उज्ज्वल प्रसाई / १३ माघ २०७४
एकसरो झरी परेर रहेपछि भदौरे घाम आफ्नो विराट रूप प्रदर्शन गर्ने तरखरमा छ। इन्दिरा गान्धी एअरपोर्टको ३ नम्बर टर्मिनलबाट बाहिर निस्कँदा सामना गरेको पहिलो चुनौती घामको उही विराट रूप हो।
एअरपोर्टभित्रको वातानुकुलित कक्षबाट बाहिरिँदा झरी भर्खरै रहेको छ। तापमान अनुमान गर्न लाग्ने समयभित्र सर्वांग शरीर पसिनाले भिजिसक्छ। भिजेको कमेज यसो छामेर मनमनै भन्छु, ‘बादल च्यातेर धमाधम पचासवटा घाम निस्के कि कसो !’
पसिनाले भिजेका हातले झोला तान्दै प्रिपेड ट्याक्सी खोज्छु। केही सय भारु एउटा सानो झ्यालबाट भित्र छिराएपछि कालो रङको ट्याक्सी अघिल्तिर आइपुग्छ। एअरपोर्ट छोडेर बाहिर निस्कँदा ट्याक्सीको झ्यालबाट हावा होइन तातो बाफ पसेर न्याक्न खोज्छ। झापाको गर्मी पचाएको शरीर दिल्लीको घामले फतक्क गलाउँछ।
उज्ज्वल प्रसाई / १८ पुष २०७४-
बाहिर आइरहेका खबरहरू सही हुन् भने केही दिनमा एमालेनेता केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको प्रक्रिया सुचारु रहेको विश्वासमा सरकारमा सामेल हुनेछ। यसरी बनेको सरकार स्थिर हुने दलिल स्थापित छ। पाँच वर्ष सत्ता समीकरणको चाकाचुली धेरै नमच्चाई विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डामा दत्तचित्त हुने बाचाकसम सार्वजनिक छ। नेपाली राजनीतिमा स्थापित यो मोहक कार्यसूचीमा अडिग रहन एमाले र माओवादीलाई सञ्चारमाध्यम र चल्तीका बुद्धिजीवीको ठूलो जोड छ।
एकछिनलाई मानौं यी सबै आश्वासन पूरा हुन थाले। एमाले र माओवादीले सरकार बनाए, त्यसलाई स्थिरता दिए। यसैबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया दाबीअनुरूप अघि बढ्यो र केही समयमा सत्तासीन दुई पार्टी एक बने। अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले जनमतबाट अनुमोदन गराएको विकास र समृद्धिको एजेन्डा कसरी अघि बढ्छ ? सरकार बनेको कति समयमा उनीहरूले सो कार्यसूचीलाई ठोस आकार दिनेछन् ? नेपाललाई विकसित र समृद्ध बनाउन के के गर्नेछन् ? के कुनै खास विकास मोडलको आविष्कार गर्नेछन् वा कतै प्रचलित मोडलको अनुशरण ? त्यो मोडलले नेपाली समाजका विशिष्टतालाई कति सम्बोधन गर्नेछ ?
यी प्रश्नहरूका उत्तर दिइएका छैनन्।
एमालेनिकट अर्थशास्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडालाई समृद्धिसम्बन्धी केही प्रश्न सोध्नुबाहेक कुनै ठोस उत्तर खोज्ने प्रयत्न भएका छैनन्। पत्रपत्रिकाका विचारपृष्ठ र सम्पादकीय मूलतः कमजोर बनेको कांग्रेसलाई सुध्रिन उपदेश दिने तथा ‘वाम एकता’ को दीर्घायू र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नेमा सीमित छन्। काठमाडौंमा हुने गोष्ठी र साँझेभेलामा भेट भएका नेतालाई कसैले सोध्यो भने, उनीहरू विकासका लागि कुल गाहस्र्थ उत्पादन बढाउनमा लागिपर्ने बताउँछन्। बिजुली उत्पादन र विदेशी लगानीका लागि उचित वातावरणका कथा पनि हाल्छन्। चिनियाँ सहयोगका आशा भरोसाप्रति मुस्कुराउँछन्। बस्।
आर्थिक वृद्धिको मोहजाल
एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी र कर्पोरेट बजारको प्रवेशलाई सकारात्मक मानेका छन्। यी दुई क्षेत्रको समग्र जिम्मा राज्यले लिन नसक्ने भएकाले बजारको प्रवेशलाई अनिवार्य मानिएको अन्दाज गर्न सकिन्छ। मुनाफालाई केन्द्रमा राखेर गरिने शिक्षा र स्वास्थ्यका निजी उद्यमलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने सवालप्रति उनीहरूको उदासीनता प्रष्ट छ। निर्वाचनताका दुवै शक्तिशाली अध्यक्षहरूले आवश्यक मापदण्ड नपुगेका निजी स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्रहरूका सम्बन्धनका मागप्रति देखाएको ऐक्यबद्धता नै पर्याप्त सन्देश हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्पोरेट बजारलाई नियमनको उल्झनमा नपार्ने उनीहरूको उद्देश्यले विकासको गुजराती रवैयाको झल्को दिन्छ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतको गुजरात राज्यले विकासमा ठूलो फड्को मारेको कथा भारतमा जतिकै नेपालमा पनि चर्चित छ। मोदीले गरेका विकासे तरक्की हेर्न गुजरात पुग्ने नेपाली व्यापारी र उद्यमीहरूको संख्या ठूलो छ। अहमदाबाद, सुरत, बरोदा र राजकोट जस्ता सहर पुगेर त्यहाँका ठूला बाटा, उद्योग, बजार र अग्ला घरका फोटा खिचेर आउनेहरूको संख्या उति नै। नेपाली राष्ट्रवादले मोदी–मायाको जालो नच्यातेसम्म धनाढ्य नेपालीबाट गुजराती विकासका कथा सामाजिक सञ्जालमा छाउने क्रम द्रुत थियो। वाद र सिद्धान्तमा फसेकाले विकास गर्न नसकेको भनेर नेपालका पार्टीको आलोचना गर्नेहरूले समेत गुजरातलाई नै मोडल बनाउने सल्लाह दिने गर्थे।
भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको उदय हुँदै गर्दा सिंगो भारतमा गुजराती मोडल अपनाइने खबरले यहाँका ठूला व्यापारीलाई हौस्याएको थियो। विकास र समृद्धिका कोरा सपनामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता पनि मोदीबाट हदैसम्म प्रभावित थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर पहिलोपटक नेपाली संसद्मा आइपुगेका मोदीको ‘पानी र जवानी’ भाषणबाट भावविह्वल भएर पत्रपत्रिकामा उनलाई जवाहरलाल नेहरू जतिकै उच्च व्यक्तित्व भएको भनेर प्रशंसा गर्न थालियो। भारतमा विकास–पुरुषको रूपमा उनको जसरी आक्रामक प्रचार गरियो, त्यसको प्रभाव नेपालका नेता, कार्यकर्ता, नीतिनिर्माता तथा अर्थशास्त्रीहरूमा समेत पर्‍यो।
प्रभावितहरू सबै उनले गुजरातमा गरेको ‘ग्रोथ’ का आँकडा सुनाउँथे। सन् २००३–२००४ देखि २०११–२०१२ सम्म आइपुग्दा गुजरातको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य फरक आएको सत्य हो। तर त्यसले गुजरातका बहुसंख्यक जनतामा के फरक पारेको छ भनेर नहेर्दा विकासको कथा अपूरो हुन्छ। अर्ध–सत्यको झन्डा हल्लाएर नेपालमा गुजराती मोडल दोहोर्‍याउने सपना बाँड्नेहरू अहिले मोदीको नाम लिन अन्कनाउँछन्। तर समृद्धिको सपनामा आर्थिक वृद्धिको मोदी छाया मडारिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। स्मार्ट सिटीका गफ, मेट्रो रेलका किस्सा आदिले गुजराती शैलीकै छनक ल्याउँछ। मोदाीको पदचिन्ह पछ्याउँदै विकास–पुरुषको रूपमा नेपालमा उदाउन खोजेका भावी प्रधानमन्त्री ओलीको विकास–कथ्य कत्ति पनि फरक छैन।
गुजराती विकासका बाइप्रोडक्ट
गुजराती विकासको सम्यक अध्ययन गरेकी अर्थशास्त्री इन्दिरा हिर्वेका अनुसार गुजरातमा मूलतः तीन पक्षमा पर्याप्त ध्यान पु¥याइएको थियो। कर्पोरेट लगानी भित्र्याउनका लागि चाहिने पूर्वाधारको द्रुत विकास, कर्पोरेट एकाइहरूको सहज सञ्चालनका लागि शासन प्रणालीमा ठूलो फेरबदल, लगानीको आयतन बढाउन इतिहासमा सबैभन्दा बढी कर्पोरेटलाई सरकारी सहुलियत र सुविधा। सडक, एयरपोर्ट र ऊर्जाजस्ता पूर्वाधार वृद्धिमा विशेष जोड दिइएको थियो। लगानी प्रस्तावहरू सहजै पास गराउन औपचारिक झन्झटहरू घटाइयो, बैंकको ऋण सहज बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरियो। सामान र सेवा बिक्रीमा लगाइने करको दायरा पनि घटाइयो। जल, जंगल, जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत दोहनमा निजी कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई काफी सहुलियत दिइयो।
यसरी कर्पोरेटलाई प्रसस्त सहुलियत दिएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राज्य सरकारको लगानी न्यून बन्न पुग्यो। साधारणतया कुल आयको ५ देखि ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुने गरेकोमा २ प्रतिशतमा झर्‍यो, स्वास्थ्यमा ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी हुने गरेकोमा त्यो घटेर ०.८ प्रतिशतमा पुग्यो। यही दौरान गुजरात राज्यका ४५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणका सिकार भए भने मातृ मृत्युदर घट्नुपर्नेमा दिनदिनै बढ्न थाल्यो। नब्बे प्रतिशत बढी मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। गुजरात राज्यका आदिवासीहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। धेरैजसो काम पाइने आशामा सहर पस्न थालेका छन् जहाँ आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित भएर उनीहरूले सडकमा जीवन गुजार्नु परेको छ।
उत्पादनमा ह्रास आएसँगै रोजगारी घट्न थालेको छ। उद्योगहरूमा नयाँ र किफायती प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेपछि थोरै मानवीय श्रमबाट धेरै उत्पादन गर्न थालियो। फलस्वरूप, रोजगारीको मात्रा वृद्धि भएन। बजारमा बढ्दै गएका रोजगार–आकांक्षीहरूको संख्यालाई सम्बोधन गर्न निर्माण कम्पनी, सेवा क्षेत्र र यातायत मात्रै रहे। अर्थशास्त्री हिर्वेलगायतले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘ग्रोथ अर डिभेलोपमेन्टः ह्वीच वे इज गुजरात गोइङ’ मा उल्लेख गरेअनुसार यी क्षेत्रमा पाइने रोजगारी नियमित रोजगारी थिएन, बरु थोरै वेतनमा केही समयका लागि दिइने जागिर थियो। यस्ता रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान हुँदैनन् र मजदुरका आधारभूत माग राख्नलाई कुनै बलियो संगठन निर्माणको गुन्जायस पनि हुँदैन। त्यसैले विज्ञान र प्रविधि पढ्न हौस्याएका युवा पढाइ सकेपछि दिगो कामको खोजीमा भौंतारिएका छन्। तिनै बेरोजगार युवा सरकारप्रतिको आफ्नो रोषलाई विभिन्न माध्यममार्फत व्यक्त गरिरहेका छन्। पटेल जातिका लागि आरक्षणको माग गर्दै सडकमा उर्लिएका युवा मूलतः मिहिनेतले पढेलेखेर रोजगारी नपाएका युवा हुन्।
हिर्वेलगायत अनुसन्धाताहरूको निश्कर्ष छ, ‘वृद्धि माथिल्लो वर्गका लागि मात्रै भएको छ, आधारभूत तहका जनतामा पुगेको छैन। केन्द्र र राज्य सरकारले बनाएका गरिबमुखी कार्यक्रम कुनै पनि लागू भएका छैनन्। त्यसैले गुजरात मोडलबारे गरिएका हल्ला निराधार र झुटा हुन्।’
नवउदारवादको बाटो समाजवाद ?
सतहमा देखिएका प्रारम्भिक संकेत हेर्दा, अहिले लगाइएको विकास र समृद्धिको नारा गुजराती शैलीको नवउदारवादी अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने यत्न हो। रेमिटेन्सका भरमा चलेका केही सहरबजारबाहेक अन्यत्र मध्यम वर्गसमेत राम्रोसँग हुर्कन नसकेको मुलुकमा नवउदारवादी विकासको प्रभाव कस्तो पर्नेछ भन्नेमा कसैले ठोस अध्ययन गरेको थाहा पाइएको छैन। अन्यत्रका अनुभव हेर्दा, नवउदारवादमा समान वितरणको सवाल असान्दर्भिक हुन्छ भने राज्य पनि आफ्ना मुख्य दायित्वबाट विस्तारै पछि हट्दै जान थाल्छ। गुजरात नै दोहोरियो भने त रोजगारीका सम्भावना अझ क्षीण हुँदै जान्छन्।
त्यसउपर ‘पेट्रोन–क्लाइन्ट’ सम्बन्धमा जेलिएको भीमकाय पार्टी संगठनको प्रभाव थेग्नुपर्ने समस्या छ। यस्तो सम्बन्धमा अडिएको बलियो संगठनले प्रगतिशील काम गर्नमा होइन, भएका स्रोत दोहन गर्नमा पार्टीमाथि बढी दबाब दिन्छ। दक्षता र सीपभन्दा बढी हिजो पार्टीका नेतालाई चुनाव जिताउन काम गरेका वा पैसा उठाएका कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने संयन्त्रका रूपमा पार्टीले सरकार चलाउँछ। साथै, निर्वाचन जित्न पैसाको थैलो नेताका दैलामा पुर्‍याएका ठग ठेकेदार, भ्रष्ट व्यापारी र जागिरेका कब्जामा सिंगो सरकार फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ को कचल्टिएको सुपथ उदाहरण नै नेपाल बन्न सक्छ।
नवउदारवादी विकासे मोडलबारे भारतमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। साथै, ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ का अभ्यासले निम्त्याएका ठूला समस्या पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ। अहिले नेपालमा विकास र समृद्धिका हल्ला गर्नेले समेत ती बहसको अध्ययन गरे फाइदा हुन्छ। समाजवादका उडन्ते गफ गर्नुभन्दा बढी हितकर अमत्र्य सेन र जगदीश भगवती जस्ता विद्वानका बीचमा भएका विकाससम्बन्धी विमर्श खोजेर पढ्नु वेश हुन्छ। सेन यहाँका कथित वामले आफूलाई दाबी गरेका जस्ता वाम होइनन् तर उनका तर्क ध्यानसँग मनन गर्दा मात्रै पनि अब बन्ने भनिएको स्थिर सरकारले ठूला नकाम गर्नबाट आफूलाई जोगाउन सक्दो हो। नत्र उही पुरानो ‘वृद्ध भत्ता’ लाई नै समाजवादी भ्रुण भनेर जनता झुक्यारहनुपर्ने दुःख बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित / http://annapurnapost.com/news/87336
उज्ज्वल प्रसाई / जनकपुर ६ श्रावन, २०७२
भोलि सीमांकन गरेर नै संविधान जारी गरिएछ भने पनि मधेसलाई सर्वथा कमजोर बनाउने तय गरेर नै त्यो सम्भव तुल्याइनेछप्रचण्डले ‘केपी डक्ट्रिन’लाई नै आफ्नो राजनीतिक रोडम्याप बनाएको सचेत मधेसी नागरिकहरुको बुझाइ छ । मधेसको कुनै अस्तित्व नै नभएको बताउने केपी ओलीलाई मधेसले आफ्नो मित्र मान्दैन, प्रचण्डलाई पनि मित्र मानिरहन उनीहरुको कुनै बाध्यता छैन । १६ बुँदे त्यस्तो महेन्द्रीय धागो हो जसले केपी र प्रचण्डलाई कसेर बाँधेको छ । महेन्द्रको प्रेतले मधेसलाई सदैव परचक्री देख्छ भन्ने बुझ्न मधेसीको आजपर्यन्तको अलगाव भोगाइ नै काफी छ । अब अर्को मौका दिने शंकाको सुविधा समेत रहेन मधेसीसँग । कारण, मस्यौदाले मधेसलाई अहिलेभन्दा कमजोर बनाएको छ ।भोलि सीमांकन गरेर नै संविधान जारी गरिएछ भने पनि मधेसलाई सर्वथा कमजोर बनाउने तय गरेर नै त्यो सम्भव तुल्याइनेछ । केपी डक्ट्रिनमा यो भन्दा फरक केही आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन ।
उज्ज्वल प्रसाई / २१ आषाढ, २०७२-
संविधानसभाका चार दलबीच भएको सोह्र बुँदे सहमति, सर्वोच्च अदालतको परमादेश र अहिले बाहिर ल्याइएको संविधानको मस्यौदाबारे प्रसिद्ध चिन्तक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदीप गिरीसँग उज्ज्वल प्रसाईले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:
रेकर्ड: संविधानसभाका चार मुख्य दलबीचको सोह्र बुँदे सहमति र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
वैशाख १२ गते नेपालमा आएको भूकम्पका नराम्रा पहलु सबैलाई थाहा नै छ । तर, भूकम्पले हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा चेत आए झैं देखियो । सबै दलका नेताहरुलाई यो संविधान सभाको साँघुरो सुरुंगबाट निष्किने बहाना चाहिएको रहेछ । सबै लागेर फटाफट सर्टकट बाटोबाट संविधान ल्याउने जमर्को गरे । दलका नेताको यो हतारो बुझ्दा बुझ्दै हठात सर्वोच्च अदालतबाट गिरिश लाल कर्णको एकल इजलासले सिमांकन र नामांकनलाई छुटाएर तपाईंहरुले संविधान घोषणा गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आदेश गर्यो । त्यो निर्णयले सिंगो मुलुकभरि नै तरंग आयो । केही अवाञ्छित टिप्पणीहरु पनि आए । यो मधेशको वितण्डा हो किनभने निवेदक, न्यायधिस, राष्ट्रपति सबै मधेसी छन् भन्ने जस्ता अवाञ्छित टिप्पणी आए । यस सिलसिलामा कतिपय सांसदहरुले मलाई समेत आमन्त्रण गरेर संविधान सभाको बैठक अघि संविधानसभाकै परिसरमा एउटा बेग्लै बैठक गरे । उनीहरु मधेशको पिंडा बोलिरहेका थिए । तर, उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले भनें, अहिले मधेश र जनजातीका पिंडाका कुरा छाडिदिनुस् । सिंगो मुलुक अहिले चाँडो भन्दा चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने चाहान्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश उतिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिंदैन ।
उज्ज्वल प्रसाई / १७ आषाढ, २०७२-
एनेकपा माओवादीले आफू अरु संसदवादी पार्टीभन्दा अलग रहेनौं भन्ने इमान्दार आत्मस्वीकृति पेश गरेको छ । आखिर उसले लाञ्छित गर्ने गरेका संसदवादी पार्टीहरु जस्तै रुपरंग र गुदीको हुनका लागि उसले ठूलो यत्न गर्यो । अर्थात्, सो पार्टीका नेताले त्यस गन्तव्यमा पुग्न गरेको योगदान चानचुने छैन ।
उज्ज्वल प्रसाई / ८ पौष, २०७१-
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष हुन् खड्ग प्रसाद उर्फ के.पी. ओली । उनका पछिल्ला मन्तव्य सुन्दा उनको पार्टीको नाम आँफैमा एउटा ‘मिसनोमर’ हो भन्ने अनुभूत हुन्छ । अर्थात्, सो पार्टीका नाममा उल्लिखित ‘वाद’हरुलाई थोरै पनि प्रगतिशील मान्ने हो भने ओली अध्यक्ष हुन सुहाउँदो पार्टीको नाम एमाले नभएर अरु नै केही हुनु पर्नेछ । त्यसैले होला पछिल्लो समयमा केही विश्लेषकहरुले ओलीलाई नै सम्बोधन गरेर चिठी शैलीमा लेखहरु लेखे । उनीहरुले ओलीलाई समयको पदचाप सुनाउने प्रयत्न गरे । सन् १९९० मै आफूलाई राजनीतिक रुपमा ‘इन्सुलेट’ गरेका ओली त्यस्तो धुन सुन्नै सक्दैनन् । सुनेर बुझ्न सक्दैनन् । ओली मात्रै इन्सुलेट भएका हुँदा हुन् त अवस्था किञ्चित फरक हुन्थ्यो । त्यसबेला सिंगो एमाले पार्टी नै इन्सुलेटेड भएको थियो त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि नयाँ धुन पस्नै सक्दैन । केवल १९९० मा रेकर्ड गरिएको पुरानो टेप एकोहोरो बजिरहन्छ ।
उज्ज्वल प्रसाईं / २५ कार्तिक, २०७१-
नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै नेपाली अखबारका ठुलै अंश उनको प्रशंसामा समर्पण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री भए पश्चात पहिलो पटक गत श्रावणमा उनले नेपाल भ्रमण गरे । त्यसवेला मोदीले संसद भवनमा दिएको भाषणको सर्वत्र चर्चा भयो । सो भाषणको सबभन्दा बढी प्रभाव नेपालका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र राजनीतिक विश्लेषकमा नै पर्यो । भोलिपल्टका अखबारमा त्यसदिन संसद भवनमा बजेको तालीकै गडगडाहट सुनिन्थ्यो । त्यसपछिका धेरै दिनसम्म पनि मोदी जपनाको लामा फेहरिस्त छापिए । उनको प्रधानमन्त्रीत्व नेपालका लागि कति फाइदाजनक छ भन्ने वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भन्दा अतिरञ्जित प्रशंसा काठमाण्डौका नाम चलेका विश्लेषकहरुको दिनचर्या बन्यो । आसन्न सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दोश्रो पटक नेपाल आउँदैछन् । पहिलो पटक उनको आगमनमा आह्लादित बनेको काठमाण्डौ, यस पटक भने भयग्रस्त छ ।
सत्ताधारी भयग्रस्त हुने दुई कारण छन्ः सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन जमिनबाट जनकपुर हुँदै काठमाण्डौ आउने मोदीको योजना र त्यहाँ हुने सभालाई उनले गर्न चाहेको सम्बोधन ।
2:07 AM Book Review No comments
उज्ज्वल प्रसाईं / २ असार-
4:00 AM Interview No comments
उज्ज्वल प्रसाईं / चैत्र ५, २०७३-
उज्ज्वल प्रसाईं / फाल्गुन २३ -
तुहिएको सपनाको कुनै गन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? धेरैले सपाट उत्तर दिनेछन्, सपनाको कुनै गन्ध हुँदैन । कसैलाई लाग्न सक्छ यो प्रश्न आफैंमा सिजोपनिक छ । यस्तो सवालको जवाफ खोज्नु सिजोप|mेनियाबाट ग्रस्त हुने खतरा मोल्नु हो । जब मान्छे अक्कडा प्रश्नहरूको भारिले थिचिन थाल्छ, सायद त्यसै बखत ऊ सिजोप|mेनिक बन्न थाल्छ । तर, आफू बाँचेको सिंगो समय नै जब सिजोपे|mनिक बनिदिन्छ, नचाहेरै हामी त्यसको सिकार हुन थाल्छौँ । सायद विद्यमान समय जहाँ म बाँचेको छु, त्यो नै उस्तो हो । समयले मलाई सपनाको गन्ध सुँघ्न बाध्य तुल्याएको छ ।
उज्ज्वल प्रसाईं / फाल्गुन ४ -
उज्ज्वल प्रसाईं / कार्तिक ३ -
बाबु ओसेप चाको असफल लेखक हो, अहिले मध्यम स्तरको स्थानीय पत्रिकामा कार्यरत छ । हाम्रा कवि भूपी शेरचनको शब्दमा भन्ने हो भने हरेक दिन ओसेपको घाम रक्सीको गिलासमा अस्ताउँछ । आमा मारिआम्माले अर्थशास्त्र पढेकी छ तर बेरोजगार, घरधन्दामा व्यस्त । उसका हर्कत कुनै अर्धपागलको भन्दा कम छैन । आफ्नो रक्स्याहा श्रीमान् मरेको कल्पनामा उसको जिन्दगीको ठूलै हिस्सा बितेको छ । सानो छोरो थोमा हरबखत डराएको छ र उमेरले आफूभन्दा जेठी केटीलाई मन पराउँछ ।
ठूलो छोरो हो उन्नी । ऊ सत्य भनेको मान्छेले आ-आफूमा भाग लगाएको भ्रम मात्र हो भन्नेमा विश्वास गथ्र्याे, कमिक बनाउँथ्यो । उसले आजभन्दा तीन वर्षअघि, १७ वर्षको उमेरमा, आफू बस्ने अग्लो घरको बरन्डाबाट भुइँमा हामफालेर आत्महत्या गर्यो । अहिले आएर उसले बनाएको अन्तिम तर अपूरो कमिक फेला परेको छ । त्यसमा आत्महत्याको कारण हुन सक्ने अनुमानका आधारमा बाबु ओसेप उन्नीका सबै साथीहरूसँग भेट्ने र लामो कुराकानी गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । ओसेपले छोराको आत्महत्याको रहस्य उधिन्न गरेेको यात्रा नै मुख्य कथा हो उपन्यास 'द इलिसिट ह्यापिनेस अफ अदर पिपल'को ।
उज्ज्वल प्रसाईं / काठमाडौ, भाद्र २३ -
तिमीले लु सुन पढेकी छौ ?' भर्खरै सुरु भएको कुराकानीलाई बलजफ्ती आफ्नैखाले बनाउन साहित्यतिर मोड्छु । ऊ नजिकै आइपुगेको नोर्बुलिंगका दरबार अघिल्तिर फुलेका फूलहरूलाई एकटक नियालिरहेकी छ । मेरो प्रश्न नबुझेको भाव अनुहारमा पोतेर ऊ सोध्छे, 'को भन्यौ ?' म फेरि दोहोर्याउँछु, 'तिमीहरूका एकजना घगडान क्लासिक लेखक छन् नी लु सुन, तिनका कथाहरू कत्तिको पढेकी छौ ?' हाँस्दै ऊ मैले लु सुनको गलत उच्चारण गरेको प्रस्ट्याउँछे र चाइनिज पाराले उच्चारण गर्छे । माने हल्लाउँदै मन्त्रोच्चारण गरिरहेका लामाहरूको गुनगुनका बीचबाट उसले 'ल्हु जुन' भनेको जस्तो सुन्छु ।
लु सुनका कथा नेपालीमा अनुवाद गर्ने खगेन्द्र संग्रौलाले जसरी उनको नाम लेखेका थिए, त्यसरी नै उच्चारण गरेको हुँ । अब उच्चारण सुधार्ने पक्षमा छैन म । दरबारको प्रांगणमा प्रवेश गरिसकेका छौं, मान्छेको भीड र हल्ला बढी नै छ । त्यसैले अलि ठूलो स्वरमा उसलाई भन्छु, 'तिमेरले जेसुकै भने पनि 'अ म्याड म्यान्स डायरी' लेख्ने ती बूढा हाम्रा लागि लु सुन नै हुन् ।' मैले यसो भन्दा ऊ बेपत्ता हाँस्छे । हामी नोर्बुलिंगका अर्थात् दलाई लामाको समर प्यालेसभित्र पस्छौं । उसको ठूलो हाँसो हलुका मुस्कानमा खुम्चिँदै बिस्तारै विलीन हुन्छ ।
उज्ज्वल प्रसाईं / काठमाडौ, श्रावण १३ -
अंग्रेजी साहित्य तथा सांस्कृतिक सिद्धान्तका प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीको पछिल्लो कृति 'सिद्धान्तका कुरा'को विमोचन कार्यक्रममा गुरुकुलको रिमाल नाटकघर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग सम्बद्ध विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले खचाखच भरिएको थियो । अन्य विश्वविद्यालयमा पढ्ने अंग्रेजी साहित्यका विद्यार्थीको पनि राम्रै उपस्थिति थियो । यसले के संकेत गर्छ भने यो पुस्तक अंग्रेजी विभागमा अध्ययन-अध्यापन गर्नेले नै सबभन्दा बढी पढ्नेछन् । यो पंक्तिकार चाहन्छ, तिनीहरूले यो पुस्तक दोहोर्याएर पढुन् । कारण, अधिकांश विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूका दैनिकीको ठूलै अंश यी सिद्धान्तका पहेलीमा जेलिएर बित्ने गर्छ । तर, सिद्धान्तको पढाइले उनीहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनुको सट्टा मानव जीवन र दुनियाँलाई बुझ्ने कर्म अझ अस्पष्ट र समस्याग्रस्त बनाइदिन्छ । परिणामस्वरूप उनीहरूका मस्तिष्क जार्गनहरूको गुदीहीन हाडे ओखरहरूले अतिक्रमित हुन्छन् । त्यसैले गहिरो बुझाइ र गतिलो विश्लेषणको ठाउँ छिपछिपे र सतही सिद्धान्तका गफले लिन्छ । रमरम बौद्धिकता छाँट्न यत्तिको विश्वविद्यालयीय ज्ञान काफी हुन्छ तर सो अवस्थाभन्दा एक कदम अगाडि बढ्ने हो भने उप्रेतीको पछिल्लो पुस्तक पढ्न जरुरी छ ।